မိုဘိုင်းဖုန်း ကဒ် များကို စတင်ရောင်းချရာမှာ ရန်ကုန်မြို့အတွက် cdma 800 ဖြစ်ပြီး
မြို့နယ်တခု၏ ရပ်ကွက် တခုတိုင်း လိုင်းပေါင်း 80 ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
အိမ်ထောင်စုဇယား ဖြင့်နေထိုင်သူများအပြင် ၊ ဧည့်စာရင်းဖြင့် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး ၆ လ နေထိုင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်...
အိမ်ထောင်စု တစုလျှင် တကဒ် နှုန်း သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်... တချို့က အိမ်ထောင်စုထဲ ၅ ယောက်ရှိလျှင် ၅ ယောက်စလုံးအတွက် လာတင်တာ တွေ့လို့ပါ...
မဲ စနစ်နဲ့ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်... ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးကို လွှဲပေးထားတာဖြစ်လို့ တနေရာ နဲ့ တနေရာ ရွေးချယ်ပုံခြင်း တူမယ်မထင်ပါ...
ဒီသရက်နဲ.ဆိုင်ခြင်မှဆိုင်ပါမည်သို.သော်လည်း..မြန်မာ ပြည်၊ရန်ကုန်မြို.ပေါ်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ.သတင်းအမှန်မို. ကျုးပစ်မင်ဘာများအားသိထားသင်.ဂ်ျမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အသိထဲပုဂိ¾ုလ်တယောက်ရဲ. ကံဆိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ အဲဒီပုဂ¾ိုလ်က အရက်ဖြတ်လိုဂ်ျ ရွာသာကြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို ၁၉ရက်နေ.လောက်မှာ ကုသဖို.သွားရောက်တက်နေခဲ.ပါတယ်..ခမြာ တက်တဲ. ၀ါတ်မှာ အရက်ဖြတ်ရန် ဆေးကုသလျှက်ရှိသော လူ ၃၀ ရှိပါတယ်။ ခမြာဆေးရုံတက်ပြီး နောက်တ၇က်မှာဘဲ ၄င်းဆေးကုသမှုခံယူနေသာဝါတ် ကုတင်ဘေးမှ လူတဦးသည် ၄င်း(ကိုထွန်းထွန်းဆိုသူ)အားညတစ်နာရီခွဲခန်.တွင်သူ.ဧ။်ဇနီးကို အဓ¨မပြုကြံသူ၊ သားကိုသတ်သူဟုစွပ်စွဲကာ အော်ဟစ်ပြီးကုတင်တိုင်ဖြင်.ဦးခေါင်းကိုအဆက်မပြတ်ရို က်နှက်သဖြင်. ၄င်းပုဂိ¾ုလ်မှာ ညတွင်းခြင်းသေဆုံးသွားခဲ.ပါသည်။ မိသားစုဝင်များ ဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းစုံမေးမြန်းရာတွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီးမှာ ရှောင်နေပြီး တာဝန်ကျဆရာ၊ဆရာမများမှာမူ အပြင်ခဏမုန်.၀ယ်သွားစဉ်ဖြစ်ပျက်သွားခဲ.ကြောင်း..ယင်း သတ်ဖြတ်သူမှာ အရက်ဖြတ်ရန်ဆေးရုံတက်နေသောစိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖြင်.သာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ သေဆုံးသူဧ။်အလောင်းကိုမနေ.က စံပြဆေးရုံသို.ပို.ဆောင်ထားခဲ.ပြီး ယနေ.နေ.ခင်းတွင်ရေဝေးသုသာန်ဋ်မိသားစုဝင်များ မီးသဂြိုလ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်ရှိသူများဧ။်ပေါ.ဆမှုကြောင်. လူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပါပြီ။ သူ.ခမြာသေဖို.ရာဆေးရုံသွားတက်သလိုဖြစ်နေပါသည်။ သူသည်ကျမတို. သိသလောက်လူရည်ခန်.သန်.သန်.အသက်၄၀ကျော်သာရှိသေးေ သာ အိမ်ထောင်သည်မိသားစုရှိ လူရွယ်တဦးဖြစ်ပါသည်..အရက်ဖြတ်ရန်ဆေးရုံတက်ရခြင်းမှာလဲ အရက်ကိုနေ.နေ.ညညအဆင်.သောက်သုံးနေသည်.အဆင်.မဟုတ် ပါ။ စဉ်းစားစရာတခုမှာ အခြားသော အတူနေလူ ၃၀မှာ ဘာကြောင်.၀င်ရောက်ကယ်တင်တားမြစ်ခြင်းမရှိခဲ.သနည်း? စိတ်မနှံသူအား အတူယှဉ်တွဲဂ်ျ အရက်ဖြတ်သူအခြားလူကောင်းများနှင်.ဘာကြောင်.တ၀ါတ်ထဲအတူထားသနည်း? တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ ဘာကြောင်.အချိန်မှီမတားမြစ်နိုင်ခဲ.ပါသနည်း? ဘယ်ရောက်နေခဲ.ပါသလဲ? ဘာကြောင်.ယ©ုလို မခိုင်လုံသည်.ဆင်ခြေဖြင်.သာဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားသနည်း? သြ ဆေးရုံလိုနေရာမျိုးတောင်မှ လူနာတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော.ပါလား။ ဘယ်မီဒီယာမှလဲ ဒီသတင်းတင်တာမတွေ.မိသေးပါ။
jrefrmjynftpdk;&u apwemxm;pGm jzefUa0aeaom wefzdk;enf;qif;u'frsm;rSm ,cktcgwGif ,cifursm;ESifhrwl vGwfvyfpGm 0,f,lEdkifjyDjzpfygonf/ qif;u'fwpfu'faygufolrsm;rSmvnf; ESpfvHk;xD 1000zdk;avmuf aygufouJhodkUjzpfaomaBumifh or®wBuD;tygt0if tpdk;&wzGJUvHk;tm; aus;Zl;Oyum& txl;wifvsuf&Sdygonf/ aemufqHk;&&Sdaomowif;t& qif;u'faps;rsm;rSm 6aomif;cGJ ckepfaomif;0ef;usifcefUom&SdjyD; vGwfvyfpGm a&mif;0,fazmufum;vsuf&SdBuygaBumif; jynfoltrsm; rk'dwmyGm;edkif&efwifqufvdkuf&ygw,f/
'DuaeY armif'dkrDEdkeJYtwl uRefawmfwdkY vlBuD;r[kwf vli,fr[kwfawG pkNyD; vufzuf&nfqkdifxkdifae&if; owif;rsm;ukd pkaqmif;vdkufwJhtcg ....
1500 wef zkef;u'frsm;ukd eHygwfay: rlwnfNyD; ta&mif;t0,f jzpfaeMuygowJh ... 40000 uae 100000 xd ay;wJholrsm; &SdaeygowJh ... qkdifaumufaps; 30000 eJY a&mif;aps; 60000 &SdygowJh/ rsufpda&SUwif ta&mif;t0,fvkyfzdkY aps;qkdifaeMuolrsm;udk Munhf&IcJh&ygao;w,f/ zGbkwfay: u a&mif;rnf0,frnfxJrSmvnf; aps;awGeJY tvkyfjzpfaeMuygowJh/
tcsKdUuawmh tJ'Dvdk ta&mif;t0,f jzpfaeMuwmudk tjrifrMunfyJ jzpfaeMuygw,f/ cgawmfrSD ta&mif;t0,fav; vkyfpm;NyD; tydk0ifaiGav; &SmMuwmudkyJ tjypfvkdY jrifp&mvm;vdkY .. wcsKdUuvnf; pum;em xdk;Muygw,f/ rnfodkYyifjzpfygap .. t&if 2odef;cGJwef WCDMA udk av;odef;eJY a&mif;r,fqdkNyD; aps;ac: xm;wm jrifvdkuf&wJhtcgrSmawmh ckeu 1500 wef zkef;udpö cP arhoGm;NyD; qvHovdkufMuygw,f/
2odef;cGJwef WCDMA zkef;awGudk 3odef;3aomif;eJY a&mif;r,f/ tifwmeuf zGifhNyD;om;? vkdif;qGJtm; txl;aumif;onfqdkwJh aMumfjimudk jrifwkef;u tHhMoaecJhwm .. ckb,fvdkawmif qufNyD; tHhMojcif;BuD;ru tHhMo&r,frSef; rodawmhygbl;/ uRefawmfwdkYodoavmuf 2odef;cGJwefawGudk ,cktcsdefxd vGwfvyfpGm 0,f,lEkdifaeygao;w,f/ uRefawmfyJ trSwfrSm;vm; rodawmhygbl;/ 'gayr,fh ckvdk4odef;txd aps;wifa&mif;NyDqdkawmh eHygwfyJ yl;vdkYvm; .. wckckawmh xl;jcm;rI &Sd&r,fvdkY pdwf0ifpm;rdoGm;ygw,f/
aEG&moDa&mufvmNyDqdkawmh ... aeuvnf; ylvmNyDaygh ... UV Index uvnf; wufoxuf wufvmovdk rD;uvnf; ysufoxuf ysufvmw,fayghcifAsm .. ref;aEGrSm wpf&uf3em&DrD;jzwfr,fvdkY aMunmxm;ayr,fh vuf&SdtcsdefrSmawmh wpf&uf3em&Dru ... tenf;qHk;6em&Davmuf rD;jzwfaeygw,f/ jzwfwJhtcsdef rSefw,fqdk&if tvkyfvkyf&wm tqifajyr,fvkdY ,lqcJhayr,fh jzwfcsifwJhtcsdefjzwf ... vkyfcsif&m vkyfaewJhtwGuf tawmfav; 'ku©a&mufMu&ygw,f/ 'DMum;xJ a&u wpf&ufudk3Budrfay;wJhtcsdefrSm a&vmrScsnf; rD;jywfaewJhtwGuf a&u cPyJ vmNyD; jyefjywfoGm;ygw,f/ vmwJhtcsdefav; 0kdif;qGJMu&wJhtwGuf a&uvnf; tawmfav;udk tm;r&Sd cyfazsmhazsmhyJ ay;Ekdifygw,f/ 'Dxufydkylvmawmhr,fh ar? ZGefvawGrSm b,fvdk a&SUqufrvJqdkwm &ifckefzG,faumif;vSygw,f
uRefawmfwdkYodoavmuf 2odef;cGJwefawGudk ,cktcsdefxd vGwfvyfpGm 0,f,lEkdifaeygao;w,f/ uRefawmfyJ trSwfrSm;vm; rodawmhygbl;/ 'gayr,fh ckvdk4odef;txd aps;wifa&mif;NyDqdkawmh eHygwfyJ yl;vdkYvm; .. wckckawmh xl;jcm;rI &Sd&r,fvdkY pdwf0ifpm;rdoGm;ygw,f/
*vdk&Sdw,fAs/ ESpfodef;cGJzkef;u aps;uGufrSm r&Sdawmhygbl;/ qdkifawGudk ay;NyD;om;awGawmif jyefodrf;xm;ygw,f/ aps;wifa&mif;wmuawmh &Sif;&Sif;av;yg [ef;qufav; vSwyw udkifcsifwJholudk a&mif;wmrdkYjzpfrSmaygh/tck zkef;awGu tdkifzkef;wdkY? tufpfo&D;wdkY? Ekwfwl;? tdwfcsfwDpD bmeJYrS ajymvdkYrS r&wm/
t&ifuvdk odef;okH;q,favmufay;p&mvnf; rvdkawmhbl;/ udkifcsifp&m [ef;qufuav;awGuvnf; rsm;vm/ 'Dawmh tJhvdk vlwef;pm;twGuf tJh'D ESpfodef;zkef; aps;uGufu &SdaeOD;r,f xifwmygyJ/
pum;pyfrdvdkY ajym&&if NyD;cJhwJhtacgufawmh &yfuGufxJ tvkH;a& 170vm;rodbl; cGJwrf;usw,f/ reufawmfawmfav; aejrifhwJhtxd wpf&mhESpfq,fvm;yJ vmavQmufMuw,fwJh/ aemufawmhrS tJhowif;Mum;wJh olawGu wynfhtwGuf? tvkyform;twGufponfjzifh aemufqkH; axmifhig;&meJY qif;u'f&enf;vm; qdkNyD; oGm;avQmufMuwm/ (trSefuawmh ydkufqHay;NyD; 0,fokH;wmudk avQmufw,fvdkY ajymwmawG b,fawmhrsm;rS tqkH;owfrvJ rodbl;aemf)
05-02-2013 06:29 AM
မကြားချင်တဲ. မီးသတ်ကားသံတွေ.... လေးစီးပူး.. ဥသြသံဆူဆူညံပြီး...
ရွှေဂုံတိုင်ကနေ ကမ္ဘာအေး လမ်းအတိုင်း တောင်ကနေမြောက်ကိုတက်သွားကြတယ်ဗျ၊ နောက်ထပ်လည်း
အသံတွေကြားနေရတယ်... ၊ ဘယ်မှာများလောင်ပြန်ပါလိမ်.ဗျာ... ၊ ကျူးပစ်ကလည်း လေးလံချက်...
ကျေးဇူးကလစ်တောင် တခါနိုပ်ရင် မိနစ်ဝက်လောက်စောင်.နေရတယ်... ၊ ဖိုင်ဖာလိုင်းလည်း သွားပြီထင်တာပဲ...ဗျာ။
..ဗဟိုရ်မီးသတ်ကိုလှမ်းမေးလိုက်တာ...စောစောက လို.ဘဲပြောရသေး..ဗဟန်းမဟာစည်သာသနာ.ရိပ်သာလမ်းမှာပါ ပြီးသွားပြီလို.ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပါတယ်..ပြည်.ပြည်.စုံစုံတော.သတင်းမသိလိုက်ရပါဘူး.။
ဒီနေ. မီးလာရမဲ. အချိန် မလာ လို. Epc ရုံးကို လှမ်းမေးတာ...ဒီနေ.ကစလို. မီးလုံးဝမပေးတော.ပါတဲ. ...၊
ရက်အကန်.အသတ် မရှိ ဖြစ်ပါတယ်တဲ.ခင်ဗျ... ၊ တောင်ဒဂုံ စက်မူဇုန် ဖက်ကပါ.... ။
ညတုန်းက တာချီလိတ်မှာ ငလျင် လုပ်ပါတယ်
ညဆိုပေမဲ့ မနက် ၂ နာရီ ၄၅ လောက်ဆိုတော့ ဒီမနက်ပေါ့
ပျင်းလားဆိုတော့ ပျင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါမပဲ ၁၀ စက်ကန့် လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်
ကျနော်ကတော့ ရပ်သွားတာနဲ့ ပြေးဆင်းတာပဲ ထပ်လာမှာ ကြောက်လို့
'DaeY ( 10 ar 2013 )nae5em&DrSm a': pk u owif;pm&Sif;vif;yGJjyKvkyfygr,f... zGJUpnf;yHk tajccH Oya' jyifqif&efndSEdkif;aqG;aEG;rI taMumif;&Sif;r,fvdkY owif;&&Sdygw,f/